မျက် ရည် တွေ လား ချွေး တွေ လား – Hlataw.com
ခက် တယ်ကွာ…မင်း..လုပ်တာ ငါတော့ သေတောင်သေ လိုက်ချင်တော့တာဘဲ … အမ ရယ်..ဘယ်သူမှ သိတဲ့ ကိစ္စမှမဟုတ်တာ ..လာပါဗှာ..လိုးကြရအောင် … ( အို…လွှတ်..လွှတ် ..မင်း…မင်း..သိပ်ရဲတာဘဲ …) အာဝါး က တော်တော် သန်မာ သည် ..။မေသက် ကို အတင်းဝင်ဖက်ခါ အတွင်းခန်းကို ဆွဲခေါ်လေ သည် ..။ နီနီ ရွေးစရာ လမ်းက မရှိ ..။ ကိုကျော်သိန်းသိရင် မိုးမီးလောင်မည် ..။ သူ့ကို ပေးလိုးပြီး နုတ်ပိတ်ရတော့မှာဘဲ …။( ကဲ..ကဲ..တအား မလုပ်နဲ့ကွာ..ငါ့အသားတွေ အညိုအမဲ စွဲကုန်မယ် …မင်းလိုချင်တာ ယူသွား..ဟုတ်ပီလား …) အာဝါး သူ ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ ဝင်လာပြီ မို့ အရမ်း ဝမ်းသာ သွားလေ သည် ..။
သူ အပင်ပမ်းခံပြီး သင်္ဘောသား တွေဆီက ကိုကျော်သိန်း ရဲ့ သင်္ဘောလိပ်စာ ရအောင် လုပ်ရတာ တန်သွားပြီ ..။ ဒီလို ချောလှပြီး တောင့်တင်းတဲ့ မိန်းမ မျိုး သူ လိုးရဖို့ဆိုတာ က မလွယ်လှဘူး ..။ နီနီလဲ ကုတင်ပေါ် တက်ထိုင်လိုက်ပြီး ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်ကို အသာလေး မဟကာ .. ( လာ..လာ..လုပ် …) ဆိုပြီး ပေါင် ကို ကားပေးလိုက် သည် ..။အာဝါးကလဲ လူလည် ..။ ( ဒီလို ပန်းဆိုးတန်းကုန်းတံတားအောက် က ( တရှဲတမတ် ) ပြတဲ့ အပေါစား ဖါသည် လို မလုပ်နဲ့ လေ..အမ ထမိန်ကို အားလုံး ချွတ်လိုက်ပါဗျာ …) ( မင်း..သိပ် လည်တယ် …) နီနီ သူ့ကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး ထမိန်ကို ကွင်းလုံးပုံ ချွတ်ချလိုက်လေ သည် ..။ မီးရောင် အောက်မှာ ဖြူဖွေးလှပတဲ့ နီနီ ရဲ့ ဝတ်လစ်စားလစ် ကိုယ် အလှကို အာဝါး တွေ့လိုက်ရသောအခါ ..သူ့ ပေါင်ကြားက ငပဲကြီး မှာ မတ်မတ်ကြီး တောင်လာ သည် ..။
နီနီ လဲ ဖိုးတာ ရဲ့ လီးထက်တောင် ရှည် တဲ့ အာဝါးရဲ့ လီးမဲမဲကြီးကို ကြည့်ကာ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထလာပြီး စိတ်ဝင်စားမိ ရ သည် ..။ လီးကြီး သည် အဝတ်မဲ့ နေသော နီနီ့ ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ တဆတ်ဆတ် လှုပ်ခါရလောက်အောင် ထကြွလာလေ သည် ..။ ( အို..နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး …ကွာ..မမ ကြောက်တယ် ..) ( မကြောက်ပါနဲ့ ဗျာ..မမ ခံနိုင်တာ ကျနော် တွေ့ဘူးတာဘဲ ..ကို ဖိုးတာ တအား ဆောင့်ပေးတာ မမ ခံနိုင်တာဘဲ …) ဆိုပြီး ပက်လက်လေး လှဲချပေးတဲ့ နီနီရဲ့ ပေါင်တွေကို ဆွဲကားပြီး ကိုယ် ပေါ်ကို တက်ခွ မှောက်လိုက်လေ သည် ..။
အာဝါး ရဲ့ လထစ်ကြီး က မှိုပွင့်ကြီးလိုဘဲ ကားနေ သည် ..။ ( ဗြိ..ပြိ …အိ…….အင်း..အဟား…ကြီးလိုက်တဲ့ ဒစ်ကြီးဟာ …) လီးကြီးတိုးဝင်လာတာသူမ စောက်နံရံတွေကို တထစ်ထစ်ဲ့ ပွတ်ဆွဲသွားလို့ မေသက် တော်တော် အီဆိမ့်သွား သည် ..။ စောကိရေတွေလဲ တအားထွက်သည်လို့ ထင်မိ သည် ..။ လီးတုတ်တုတ်ကြီး တင်းတင်းကြီး အာဝါး ကလီးကြီးကို အသာ ဆွဲနုတ်ပြီး ပြန်ထိုးသွင်းပြန် သည် ..။စောစောက ရေချိုးရင်း လီးဆာလာတာ အခု လီးကြီးတချောင်း က ပီပီပြင်ပြင် သူမ ကို လိုးနေပြီ ..။ ကိုကျော်သိန်းနဲ့ အလိုးခံရတာ မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ရ သလောက် အခု လီးတုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ အလိုးခံနေရပြီ ..။ အာဝါး ဆိုတဲ့ ကောင်လေး သည် လူနံပိန်..ကျွဲဂျိုလိန် ဆိုသလိုဘဲ လူသာ ငယ်တယ်ထင်ရပေမဲ့ နံမည်က တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ စကားလိုပါဘဲ ..။ လူနဲ့ မလိုက်အောင် ရှည်ပြီးတုတ်တဲ့ လီး ကြီးနဲ့ လိုးနေပါပြီ ..။ ကောင်လေး ကြည့်ရတာ မိန်းမ အလိုးတော်တော် အတွေ့အကြုံ ရှိဘူးသည် ထင်သည် ..။ နီနီ့ကို အပီအပြင်ကို လိုးနေပြီ ..။
ဖတ်ကနဲ..ဖတ်ကနဲ လိုးဆောင့်ချက်တွေက ထိမိ လှ သည် …။ သူဆောင့်လိုက်တိုင်း နီနီ လဲ ပြန်ပြန် ကော့ပေးမိ သည် …။သူမ ဖင်ကြီးတွေ ကို ဝေ့ကာဝိုက်ခါ ပေးနေသည် ..။ အာဝါး က ဘယ်ညာပြေးနေသော ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေကို လက်နဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး တဖန်းဖန်းဘဲ လိုးဆောင့်လေ သည် …။ ( ကောင်းလား …) ( အင်း..အင်း ..) လိုးဆောင့်တဲ့ လူက ဆောင့်သလို အောက် က ခံတဲ့ သူကလဲ ကော့ပေးလိုက် စောက်ဖုတ်နှူတ်ခမ်းတွေကို ညှစ်ပေးလိုက်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ လိုးကြရာ မကြာခင် မှာဘဲ နှစ်ဦး စလုံး ပြိုင်တူ ( ပြီး ) သွားကြလေ တော့ သည် ..။အာဝါးလဲ လီးကြီးကို မေသက် စောက်ဖုတ်ထဲက ပြန် မထုတ်ဘဲ တဆုံးသွင်းထားကာ နီနီ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖိရက်ကြီး မျက်စိတွေ ပိတ်ခါ နားနေလေ သည် ..။ ( ဖယ်အုံးကွယ်..မင်း..ကိုယ်ကြီး က လေးလိုက်တာ .) ( နောက်တခါ လိုးအုံးမှာ …) ( လိုးရမှာပါကွာ..မမလဲ မင်းလိုးတာ ကောင်းလွန်းလို့ ထပ် ခံချင်ပါသေးတယ် …) အာဝါးလဲ လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက် သည် ..။
စောစောက စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်ထားတဲ့ လီးရေတွေ နီနီ့စောက်ပတ်ထဲက စီးကျလာ လို့ နီနီလဲ လက်ဝါးလေးနဲ့ အုပ်ပြီး ရေချိုးခန်းဆီကို ပြေးလေတော့ သည် ။ အာဝါးကတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး မှိန်းနေ သည် ။သူမ စောက်ဖုတ်ကို ရေဆေးအပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါစ ငယ်တခုကို ရေဆွတ်ခါ ယူလာပြီး အာဝါးရဲ့ ပေကျံနေတဲ့ပျော့ခွေနေတဲ့ လီးတန်ကြီးကို သေသေချာချာပွတ်သပ် သုတ်သင်ပေးလေ သည် …။ ( မမ ..နောက်တခါ လိုးကြအုံးမယ် နော် …..) ( အင်းပါ ….မင်းလေး က သိပ် အလိုးကောင်းတော့ မမ လဲ ထပ် လိုးချင်ပါတယ် ကွာ ….)ကျော်သိန်း တို့သင်္ဘော သည် ဟောင်ကောင် နဲ့ ဂျပန် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ပြေးဆွဲ ကာ နေရာက ဟောင်ကောင် ပြန် အရောက် ယခင် ရနေတဲ့ ကုန်တွေ မရ တော့ဘူး ဆိုပြီး ဟောင်ကောင်မှာ ကျောက်ချထားပြီး ကုန် ဘယ်မှာ တင်နိုင်မလဲ ရှာဖွေနေ သည် ..။ ၂ရက်လောက် အကြာ ကုန်ရပြီ ဆိုပြီး ဟောင်ကောင် ဆိပ်ကမ်း က ခွါ သည် ။
သင်္ဘော မာလိန်မှူး ( ကပ်ပတိန် ) က မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့ကို ဝင်ပြီး ကုန်တင်ရမည် လို့ ပြောသည် ..။ မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေမို့ ရန်ုကုန်ကို ပြန်ဝင်မည် ဆိုတော့ အလွန်ဘဲ ဝမ်းသာ သွားကြလေ သည် ..။ ဒီ ကြေငြာချက်ကို မာလိန်မှူး က သင်္ဘော ရန်ကုန်ကို စ ဦးတည် ခုတ်မောင်းတော့မှ ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်လို့ သင်္ဘောသားများ သည် မိမိတို့ ဇနီးမယားမိသားစုတွေကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းမကြား လိုက်နိုင်ကြ ပေ ။ ရန်ကုန် ရောက်မှဘဲ မိသားစုတွေကို အံ့အားသင့် သွားအောင် ရုတ်တရက် အိမ်ပြန်သွားကြရ မယ်လို့ သင်္ဘောသား အားလုံး က တိုင်ပင်နေကြ သည် ..။ ကျော်သိန်းတို့ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ပန်းဆိုးတန်း ဆိပ်ကမ်းမှာ သင်္ဘော ကပ်လေ သည် ..။ ကျော်သိန်း က လေးဘီးအငှားကားကို တခြားသင်္ဘောသားတွေနဲ့ အတူ ပေါင်းငှားလာပြီး လမ်း၅၀ ထိပ်တွင် သူက ဆင်းကျန်ခဲ့ သည် ..။
ဒီအချိန် မှာ နီနီသည် ဖိုးတာ လာခေါ်မည်ဆိုလို့ လမ်း၅၀ ထိပ်တွင် ရပ်စောင့်နေပေ သည် ..။ မလှမ်းမကမ်းမှာ ထိုးဆိုက်လာတဲ့ လေးဘီးကား ပေါ်က ဆင်းလာသောကျော်သိန်း ကို နီနီက စပြီး မြင်လိုက် သည် …။ ( ဟင်..အကိုကြီး …) နီနီပြေးသွားပြီး ကျော်သိန်းကို နုတ်ဆက်လိုက် သည် ..။ ( ဟင်.နီနီ..ဘယ်သွားမလို့လဲ ..) ( နီနီ ဈေးသွားမလို့လေ …အကိုကြီး …. အကိုကြီးကို တွေ့လိုက်လို့ ..အကိုကြီး ပြန်လာမှာ အကြောင်းလဲ မကြားပါလား …..) ( အပြီး ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူး ….ရန်ကုန်မှာ ကုန်လာတင်တာ..နီနီ ရဲ့ ….) နီနီ သည် အရင်လိုဘဲ ဟန်ဆောင်ပြီး အမူအရာ ပိုပို နဲ့ ညုတုတုလေး .. ( ပျော်လိုက်တာ..ငါ့အကိုကြီး ပြန်လာပြီ …) ဆိုပြီး ကျော်သိန်းရဲ့ လက်မောင်းကို တွဲခိုကာ သူတို့ လမ်းထဲကို လျောက်ဝင်ကြလေ သည် ..။
သည် အချိန်မှာ နီနီ ကို လာခေါ်သော ဖိုးတာ သည် လမ်းထဲကို လင်ကြီင်္း လက်မောင်းကို တွဲခိုကာ လျောက်ဝင်သွားတဲ့ နီနီ့ ကို တွေ့လိုက် လေ သည် …။ ( ဟာ…ဘဲကြီး ပြန်ရောက်နေပါ လား ….) တိုက်ခန်းထဲကို ရောက်တော့ နီနီ က ကျော်သိန်း အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲက စပတ်ကလင် အအေး ပုလင်း ပြေးယူ ကာ ပေးသည် ..။ အလိုက်သိသော မယား လေး ကို ကျော်သိန်း သဘောကျ ကျေနပ်နေ သည် ..။အင်း..ခဏကြာမှ ခွဲခွါတာ ကြာတာကို အတိုးချပြီး လိုးမည် လို့တွေးနေ သည် ..။ ( အကိုကြီး ဘာစားမလဲ ဟင်..အကိုကြီး ပြန်လာမယ်ဆိုတာ မသိတော့ နီနီ လဲ ဘာမှ ချက်ပြုတ်မထားဘူး ..အကိုကြီးရဲ့ ..) ( ဘာမှ ချက်စရာ မလိုပါဘူး.. နီနီ ရယ်.. အကိုကြီးတို့ ဆိုင်ကဘဲ ဝယ်စားကြတာပေါ့ …) ကျော်သိန်း က သူ့အနားက ဖြတ်လျောက်သွားတဲ့ နီနီ ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်သားတွေကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်လိုက် တာကြောင့် နီနီ က ( အား…နာတယ်..အကိုကြီး……) ဆိုပြီး ညုတုတုနဲ့ အော်လိုက် သည် ။ ကျော်သိန်း ရေချိုးသည် ..။
ရေချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ နီနီ က သူ့ တကိုယ်လုံးကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီး နဲ့ ရေသုတ်ပေး သည် ..။ သူ့ကို ပြုစုတဲ့ မယားလေးကို ကျော်သိန်း ကြည့်ရင်း ကာမစိတ်တွေ နိုးကြွလာလေ သည် ..။ ( အကိုကြီးကို စုတ်ပေး မလားဟင် စုတ်ပေးမှာပေါ့ ..အကိုကြီးရဲ့ …) နီနီ က ကျော်သိန်းရှေ့မှာ ဒူးလေးထောက်လိုက်ပြီး ကျော်သိန်းရဲ့ လီးကို ဆုတ်ကိုင် ကာ ငုံလိုက် သည် ။ ပြတ်လပ်တာ ကြာနေလို့ ကျော်သိန်း သည် တဏှာ အလွန်ထန်နေပြီးစုတ်ပေးနေတဲ့ နီနီ ပါးစပ်ကို ကော့ကော့ထိုးနေ သည် ..။နီနီ လဲ သူမ ပါးစပ်ထဲ ဝင်ဝင်လာတဲ့ လီးကြီးကို လျာနဲ့ထိုးပေးကာ စုတ်နေ သည် ..။ မကြာခင်မှာဘဲ ကျော်သိန်း သုတ်တွေ ပန်းထွက်သွား သည် ..။
( အား ……ဟားဟား……) ကျော်သိန်း သင်္ဘော က ၄ရက်ကြာအောင် ကုန်တွေ တင်အပြီး နောက်တနေ့ ပြန်ထွက်ရတော့မည် လို့သိရ သည် ..။ ကျော်သိန်း လဲ နေ့တိုင်းလို နီနီ့ကို လိုးသည် ..။ တချို့နေ့တွေမှာ ၃ချီ ၄ချီ လိုး သည် ..။ နီနီ လဲ လင်ကျေနပ်စေအောင် ..သူ လိုချင်သလို အားလုံး လုပ်ပေးလေ သည် ။ယခုလဲ သင်္ဘော မကြာခင် ထွက်တော့ မှာ သိတော့ မသွားခင် မယားလေးကို အားရပါးရ လိုးလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး နီနီ့ကို အိပ်ခန်းအတွင်းကို ဆွဲခေါ်သွားလေ သည် ။ ( အကိုကြီးက လဲ နေ့ရောညရော လိုးပြီးပြီဘဲ …ထပ် လိုးအုံးမလို့လား ဟင် ….ကိုကြီင်္းက သိပ်အားကြီးတာဘဲ ဟင့်…) နီနီ က ညုတုတု နဲ့ ကျော်သိန်းကို ပြောရင်း သူမ အဝတ်တွေ အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက် သည် …။ကျော်သိန်းက ဘယ်လက်နဲ့ နီနီ့နို့တလုံးကို ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်နေပြီး ညာလက်နဲ့ ဖင်တုံးတွေကို နယ် သည်…။ ( အင်း…လိုးအုံးမယ် ….ပင်လယ်ထဲမှာ အကြာ ကြီး..မလိုးရဘဲ ပြတ်လပ်နေမှာ နီနီ ရဲ့ ….) ကျော်သိန်း က သူ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက် သည် ..။
ကျော်သိန်းရဲ့ လီးမဲမဲကြီး က ငေါငေါကြီး မတောင့်တတောင် ဖြစ်နေ သည် ..။ နီနီ က အလိုက်သိစွာနဲ့ ကျော်သိန်းရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး လီးကြီးကို စုတ်ပေးလိုက် သည် ..။ နီနီ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ….ဖိုးတာတယောက် မတွေ့ရတာကြာလို့ တအား လိုးချင်နေမှာ ဘဲလို့ တွေးနေ သည် …။ ( လျာနဲ့ထိုးလေ..နီနီ..) ကျော်သိန်း အသံကြီးကြောင့် သူ့ စိတ်တိုင်းကျ နီနီ လျာ နဲ့ လီးကြီးထိပ်ပေါက်လေးကို လျာနဲ့ ထိုးထိုးပေးနေလိုက် သည် ..။ ( စုတ်..စုတ် …..အား…ကောင်း…တယ် ..လီး ခုမှ တအားမာတောင်လာတယ်…စုတ်..စုတ် ….) ကျော်သိန်းလဲ နီနီ့ ပါးစပ်ထဲက သူ့ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက် သည် ..။ ( လိုးမယ် ..နီနီ …ဖင်ကုန်းပေး…) နီနီ လဲ လေးဘက်ထောက် ကာ ကုန်းပေးလိုက် ပြီး သူမ ဖင်ကြီးတွေကို ထောင်ပေး သည်…။ နီနီ့ စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီး သည် ဖင်ကြီးတွေ ကြားက ပြူးထွက်နေ သည် ..။
ဖြူဖွေးသော ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကြားမှာ နီ ညိုညိုစောက်ဖုတ်ကြီး က ထင်းထင်းကြီး တွေ့နေရ သည် ..။ ကျော်သိန်း မှာ စိတ်တွေ ထလာပြီး နီနီ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကုန်း ယက်လေတော့ သည် …။ ( ပလပ်..ပလပ်..ပြတ်ပြတ အို..ဟင့်…ဟင့်..) နီနီ ဖင်ကြီးတွေ ရမ်းခါနေ သည် ။ ( အို့ ကိုကြီးရယ် ….ဘာလို့ယက်နေတာလဲ လို့ ….ဟင့်ဟင့် …) ကျော်သိန်း က ဖင်ကြီးတွေကိုဆွဲဖြဲကာ ဖင်ပေါက်နီနီလေးကို ပါ လျာထိပ်နဲ့ ထိုးဆွလေသည် ..။ နီနီ မှာ တခါမှ ထိုကဲ့သို့ ဖင်ပေါက်ကို လျာထိပ်နဲ့ ထိုးတာ မခံဘူးလို့ ..တဆတ်ဆတ် ခါ နေသည် ..။
ဖင်တုံးကြီးတွေ တုံခါနေ သည် ။ ကျော်သိန်းက စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လျာကြီးထိုးသွင်းပြန် သည် ..။ စောက်ခေါင်းထဲမှာလျာကို မွှေနှောက် သည် ..။ ( အို..ရှီး….ရှီး………အာ့အာ့……….အာ့….ရှီး…) နီနီ သုတ်ရေတွေ စီးကျကာ ပြီးသွားရ သည် …။ ( ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ် ….အသဲခိုက်သွားတာဘဲ ….) ( ကဲ လိုးကြစို့ နီနီ ….) ( ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လိုးမှာလဲ ကိုကြီး …) ( နီနီကလဲ ..ကိုကြီး ဘယ်လိုပုံ ကြိုက်လဲ သိသားနဲ့…ဟဲဟဲ……) နီနီ ထင်သားဘဲ..ကိုကျော်သိန်း သည် ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး အနောက်က ဆောင့်၇တာကို အင် မတန်မှ ကြိုက် သည် ..။ ငပိသံကြီးနဲ့ ( ဒေါ်ဂီ စတိုင် ) လို့ ဘိုလို မှုတ်သေး သည် ..။ နီနီ ဖင်ထောင်ကုန်းပေးလိုက် သည် ..။ကျော်သိန်း နီနီ့ ဖင်ကြီးတွေကို တဖြန်းဖြန်း ရိုက် သည် ..။ ( ဟင့်..ကိုကြီး….ဘာလို့ ရိုက်တာလဲ …လို့..) ( မိုက်လို့…မိုက်လို့..ရိုက်တာ…) ( ဟင့် မိုက် ရင် ထောင်ကျမှာပေါ့ လို့ ….) ( ထောင်မကျခင် ထောင်ချလိုက်မယ် …) နီနီ့ ဖင်နောက်မှာနေရာယူလိုက်ပြီး နီနီ ရဲ့ ပြူးထွက်နေတဲ့ အလှရတနာ အဖုတ်ကြီးကို ငုံ့ကြည့်ပြီး သူ့ လီးကြီးကို ထိုးထည့်လေ သည် ..။
( အင်း….) ( ကောင်းလိုက် တဲ့ စောက်ပတ် …) ကျော်သိန်း ရေရေလည်လည် ဆောင့်လိုးသည် ..။ အားကုန် ဆောင့် သည် ..။ဆက်တိုက် ဆောင့် သည် …။ အချက်၅၀လောက် ဒလကြမ်းဆောင့်ပြီး သုတ်တွေ နီနီ့ စောက်တ်ထဲ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားလေ သည် …။ ကျော်သိန်း သုတ်ရေ တွေ ပေလူးနေတဲ့ လီးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင် သည် ..။ ( နီနီ ….) ( ရှင် …..အကိုကြီး …..) ( အကိုကြီး ..ဒိန်ချဉ်..သောက်ချင်တယ်ကွာ …ဒိန်ချဉ် သွား ဝယ်ပေးပါလား ……) ( ဟုတ်ကဲ့ …အကိုကြီး ……) နီနီ အဝတ်အစား ပြန်ဝတ်ပြီး တိုက်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ သည် ..။ ဒိန်ချဉ်ဆိုင် က တလမ်းကျော်မှာ …။ ဒိန်ချဉ် ဆိုင်ဘေး က စာအုပ်ဆိုင် က ဖုန်း နဲ့ ဖိုးတာ ကို နီနီ ဖုန်းဆက် လိုက် သည် …။ ဖိုးတာ က ( မမနီ ကို သိပ် လွမ်းနေတယ် ….) တဲ့ …။ နီနီက မနက်ဖန် ညနေဆို ကျော်သိန်း သင်္ဘောထွက်မှာမို့ မနက်ဖန် ညဦးပိုင်းမှာ ချိန်း လိုက် သည် …။
နီနီ ဒိန်ချဉ် ပါဆယ်ထုပ်လေး ဆွဲပြီး အိမ်ပြန်လာရင်း..အလိုးကောင်းသော အာဝါး ဆိုတဲ့ ဂိုဒေါင်စောင့်ကောင်လေးကို လဲ သတိရမိနေပြီး ဖိုးတာ မအားတဲ့ အချိန်တွေ မှာ အာဝါးကို ချိန်းပြီး လိုးခိုင်းအုံးမယ်လို့ တွေးနေမိရ သည် ။ နောက်တနေ့ ညနေ …။ ကျော်သိန်းရဲ့ သင်္ဘော ပြန်ထွက်ပြီ ..။ ပန်းဆိုးတန်း ဆိပ်ကမ်း ကနေ သင်္ဘောကြီး ပြန်ထွက် သည် ..။ ကျော်သိန်း က တက်မကိုင်တာဝန်ကျ သည် ..။ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ကို သူ တက်မကိုင်နေရင်း မြင်နေရ သည် ..။ ရန်ကုန်မြစ် အတိုင်း ပင်လယ်ဝ ကို ပြန်ထွက်လာသည် ..။ သီလဝါ အရောက် ရေကြောင်းပြ က ဆက် မထွက်နိုင်တော့ ..။ ရေကျနေသည် ..သောင်နဲ့ မလွတ် ဆိုပြီး ကျောက်ချခိုင်း သည် ..။ သည် ည သည်မှာဘဲ ကျောက်ချထားပြီး မနက်ကျမှ ရေတက်ရေကျ ကို ကြည့်ပြီး သင်္ဘောထွက် မည် လို့ ပြောသည် ..။ တည အိပ်အုံးမှာမို့ ရန်ကုန်ကို ပြန်မဲ့ ရေကြောင်းပြ နဲ့ လိုက်ချင်တဲ့ သင်္ဘောသားတွေ ပြန်လိုက်သွားပြီး မနက်ကျမှ ရေကြောင်းပြ လာမဲ့ မော်တော်လေး နဲ့ ပြန်လိုက်လာလို့ ရကြောင်း မာလိန်မှူး က ပြောသည် ..။
ကျော်သိန်း လဲ ဒီတည မယားလေးနဲ့ ထပ်အိပ်နိုင်သေးလဲ မနဲဘူး ..ဆိုပြီး မာလိန်မှူးကို သူ လဲ ပြန်လိုကြောင်း ပြောလိုက် လေ သည် ….။ကျော်သိန်း အပါအဝင် ၄ယောက် ပြန်လိုက်သွားကြ သည် ..။ ကျော်သိန်း သင်္ဘောထွက်တာ ပန်းဆိုးတန်း ဆိပ်ကမ်းက ဆိုတော့ နီနီ လိုက်ပို့ သည် ..။ သဘောင်္ကြီး ကမ်းက ခွါတော့ ကျော်သိန်း က တက်မ ကိုင် တာမို့ တက်မခန်း ( ဝှီးဟောက်စ် )ကနေ နီနီ လက်ပြ ကျန်ခဲ့တာ ကျော်သိန်း တွေ့နေရ သည် ။ နီနီ လဲ ကျော်သိန်း သင်္ဘောကြီး မြစ် ထဲ ခုတ်သွားတာ မျက်စိတဆုံး လိုက်ကြည့်နေရင်း ….စိတ်ပေါ့သွားသလို ခံစားလိုက်ရ သည် ..။ လင်ကြီးတော့ သွားပြီ …။ လင်ငယ်လေး ဖိုးတာ ဆီကို ဖုန်းထပ်ခေါ်ရအုံးမည် ..။ ကျော်သိန်းထက် လီးကြီးပြီး ကျော်သိန်းထက် အားသန် လိုးနိုင်သော ဖိုးတာ ရဲ့ အပြုအစုတွေကို ခံရတော့မှာမို့ နီနီ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေသည် ..။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ နီနီ ရေ ချိုးသည် ..။ တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာ မွှေးနဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ပွတ်တိုက် ဆေးကြော သည် ..။
အထူးသဖြင့် ..စောက်ဖုတ်ကြား..ဖင်တွေကြားပေါ့ ..။ ဖိုးတာ နမ်းရင် စုတ်ရင် ..အနံ့မနံအောင်ပေါ့ ..။ ညနေက ကျော်သိန်းကို လိုက်ပို့ပြီး အပြန် ဖိုးတာ ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လာခေါ်ဖို့ ပြောထားသည် ..။ လင်ကြီးလဲ ခုလောက်ဆို အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲ ရောက်နေလောက်ပြီ မို့ ဖိုးတာ ကို တိုက်ရှေ့ ကိုဘဲ လာခေါ်ဖို့ မှာထားလေ သည် …။ ကျော်သိန်းတို့ ပြန် လိုက်လာတဲ့ မော်တော်ဘုတ်ကလေး သည် ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် နဲ့ ရန်ကုန်မြစ်အတိုင်း ပြန် ခုတ်လာသည် ..။ အမှောင်ထု လွှမ်းခြုံလာပြီ ..။ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်း ကိုဘဲ မော်တော်လေး က ပြန် ဆိုက် သည် …။ ရေကြောင်းပြ အဖိုးကြီး က မနက်ကို စောစော သည် ဆိပ်ကမ်းကိုဘဲ ပြန် လာခဲ့ဖို့ ပြော သည် ..။ ကျော်သိန်းတို့ အငှားကားတစီး စုပြီး ငှားလိုက်ကြပြန် သည် ..။ ကျော်သိန်း သည် စုငှားလာတဲ့ အငှားကားကို လမ်းထိပ်မှာ ရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းလျောက်ခဲ့ သည် နီနီ သူ့ကို တွေ့ရင် အရမ်း အံ့သြသွားမှာဘဲ ဆိုပြီး နီနီ့ ကို ခေါ်ကာ တရုပ်တန်းဘက် တခုခုသွားစားမည် လို့ မှန်းထား သည် ..။
သူ့နေတဲ့ တိုက် ကို လှမ်းမြင်ရတဲ့ နေရာ ရောက်လာတော့ သူတို့ တိုက် လှေခါး ရှေ့ မှာ နစ်ဆန်း ဆန်နီ ပစ်ကပ် အပြာရောင် တစီး ရပ်ထားတာ တွေ့ နေရ သည် ..။ လှေခါးပေါ် က ဆင်းလာတဲ့ နီနီ့ ကို သူ ထပ်တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ သူ လှမ်းခေါ်မည် အလုပ် နီနီ နစ်ဆန်းကား အပြာလေးထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရ သည် …။ နီနီ သည် ကားထဲက ကားမောင်းသူကို ရီပြီး စကားပြောနေ သည် ..။ သူ အမြန် ပြေးသွားသည် ..။ ကားလေး က ဝူးကနဲ မောင်းထွက်သွားပါ သည် ..။ သူ မမှီလိုက်တော့ …။ နစ်ဆန်းဆန်နီပစ်ကပ်လေး ရဲ့ လင်းနေတဲ့ နောက်မီးနီနီ တွေ ကို သူ ငေးကြည့်နေမိ သည် …။ နောက်မီး နီနီ လင်းနေသည် ။ ကျော်သိန်း ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေ ကျကာ မောနေ သည် ..။ မျက်လုံးတွေထဲက ကျလာတာ မျက်ရေတွေလား.. ချွေးတွေလား ..သူ မသိတော့ ..။ သူ့ပါးစပ် က ( သြော်…မိန်းမ မိန်းမ ..) လို့ ရေရွတ်နေပေ သည် …….။ ပြီးပါပြီ
တစ် ခု လပ် မိန်း မ ပျို လေး
အ ချစ် ရဲ့ကျေး ကျွန်